विश्व शैली २०१ in मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउँछ यात्रा समाचार
गत शुक्रबार चिनियाँ समुदायले नयाँ वर्ष मनायो, विशेष गरी आफ्नो पात्रो अनुसार 4716 XNUMX१XNUMX, एसियाली देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परम्परागत बिदा। २०१ 2018 मा, कुकुरको चिन्ह केन्द्रीय व्यक्तित्व हो, जहाँ निष्ठा, समानुभूति, साहस र बुद्धिको जस्ता गुणहरू जिम्मेवार छ।
यद्यपि प्रत्येक चिन्हको फरक फरक वर्ष हुन्छ, २०१ the मा चिनियाँले व्यक्तिगत र व्यावसायिक भाग्यको एक वर्षको भविष्यवाणी गर्दछन् विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जो जीवनका घटनाहरू अनुकूल गर्न बढी क्षमता राख्छन्।
चिनियाँ नववर्षको उत्सव मार्च २ सम्म चलेको थियो, जम्मा १2दिनसम्म चिनियाँ परिवारहरूले अग्नि मुर्गाको वर्षदेखि पृथ्वी कुकुरको बर्षमा रूपान्तरण गर्छन् खुशी र खुशीलाई आकर्षित गर्नका लागि। भाग्यले साथ दिओस्।
स्पेनमा चिनियाँ समुदाय ठूलो छ र बार्सिलोना, म्याड्रिड वा भ्यालेन्सियाजस्ता शहरहरूले पनि कुकुर वर्षलाई मनाउन र स्वागत गर्न तयारी गरिरहेका छन्।
1 खुसी! 4716१!!
2 चीनमा नयाँ साल कसरी मनाइन्छ?
3 र संसारमा?
4 के चिनियाँ नयाँ वर्ष स्पेनमा मनाईन्छ?
चिनियाँ क्यालेन्डर प्राचीन कालको अर्थव्यवस्थाको इन्जिन, कृषि चक्रलाई बदल्नको लागि चन्द्रमाका चरणहरू अवलोकन गर्न आधारित समयको गणनामा आधारित छ।
यस क्यालेन्डरका अनुसार, पहिलो अमावसम्माको रूप भनेको वर्षको परिवर्तन र उत्सवहरूको साथ मिल्दछ जुन सामान्यतया जनवरी २१ र फेब्रुअरी २० बीचको हुन्छ।
चीनमा नयाँ साल कसरी मनाइन्छ?
चीनमा, यो एक राष्ट्रिय बिदा हो जहाँ प्रायः कामदारहरूको हप्तामा लामो छुट्टी हुन्छ। नयाँ वर्ष परिवार पुनर्मिलन द्वारा चिह्नित छ, देश मा लाखौं विस्थापनको कारण।
चाडपर्वको सुरूमा, चिनियाँ परिवारहरूले आफ्नो घरको झ्याल र ढोका खोल्दछन् ताकि अघिल्लो वर्ष उनीहरूले ल्याएका सबै नराम्रा चीजहरू बाहिर आए। यस बीच, खुला स्थानहरूमा, सडकहरू रातो लालटेनले भरिएका छन् र त्यहाँ दुष्टात्माहरूलाई भगाउन ड्र्यागन र सिंहहरूको परेडहरू छन्। थप रूपमा, कुकुरको वर्षको अवसरमा, यसको आंकडा सम्बन्धित सबै प्रकारका वस्तुहरू स्टोरहरूमा बिक्री गरिन्छ।
परम्परागत कार्यहरू लालटेनको उत्सवको साथ टु .्गिन्छ जुन आकाशमा फ्याँकियो जुन यसलाई उदाउनको लागि र आतिशबाजी प्रदर्शनको साथ। यद्यपि बेइजि inमा यस वर्ष कुनै पटाका वा आतिशबाजी हुने छैन किनकि कानून पारित भएपछि उनीहरूले उच्च प्रदूषणका कारण पाँचौं रिंग रोडमा निषेध गर्दछ।
यस उत्सवको अन्य उत्सुकताहरू यो हो कि कसैले पनि विगतको बारेमा कुरा गर्दैनन् किनकी यो दुर्भाग्य आकर्षित गर्दछ र बच्चाहरूलाई सजाय दिइदैन, र उनीहरूसित शरारत गर्ने केही स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर मानिन्छ।
छवि | स्पेनिशमा लन्डन
चिनियाँ नयाँ वर्ष २०१ 2018 को आगमन ग्रहको धेरै भागहरूमा मनाइएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा न्यु योर्क शहरमा एउटा प्रभावशाली आतिशबाजी प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो, यद्यपि नयाँ वर्षको शुरुवात सियाटल, स्यान फ्रान्सिस्को वा वाशिंगटनमा पनि मनाइएको थियो।
लन्डनले एशियन महाद्वीप बाहिर चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउने शहर भन्ने दाबी गरेको छ। त्यहाँ क्रिस्टन्स वेस्ट एन्डमा चिनटाउन हुँदै ट्राफल्गर स्क्वायरमा हुँदै छन् जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको होस्ट गर्दछ। लन्डन चिनटाउन चिनियाँ संघ द्वारा आयोजित निःशुल्क गतिविधिहरू र प्रत्येक वर्ष सयौं आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउने अन्य देशहरू फिलिपिन्स, ताइवान, सिंगापुर, क्यानाडा वा अष्ट्रेलिया हुन्।
के चिनियाँ नयाँ वर्ष स्पेनमा मनाईन्छ?
स्पेन पनि चिनियाँ वर्ष २०१ of को उत्सवको लागि आयोजनाहरूमा सामेल छ। उदाहरणका लागि, म्याड्रिडले फेब्रुअरी २ until सम्म सबै प्रकारका गतिविधिहरू आयोजना गरिसकेका छन जसले गर्दा आगन्तुकहरू र स्थानीय मानिसहरूले चिनियाँ संस्कृतिको बारेमा बढी सिक्न र रमाउन सक्छन्। कन्सर्टहरू, मेलाहरू, नाचहरू र ग्यास्ट्रोनोमिक मार्गहरू केवल निर्धारित कार्यक्रमहरू हुन्।
चिनियाँ नयाँ वर्ष पनि बार्सिलोना मा परेड, संगीत कार्यक्रम र पासेओ डे Lluís साथीहरु मा एक gastronomic र सांस्कृतिक मेला संग मनाईन्छ। अन्य शहरहरू जस्तै ग्रेनाडा, पाल्मा वा भ्यालेन्सिया पनि पृथ्वी कुकुर को वर्ष सम्बन्धित गतिविधिहरू आयोजना गर्दछ।
त्यसोभए तपाईं जहाँ भए पनि, नयाँ वर्षको उत्सवहरूमा भाग लिनको लागि निश्चित ठाउँ भेट्टाउनुहुनेछ र ठूलो समय पाउनुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » विश्व शैली २०१ in मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउँछ